Miswe 4.2 inouya neyakajeka inogadziridza, nyowani vhezheni yeTor uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Miswe 4.2 inouya neyakajeka inogadziridza, nyowani vhezheni yeTor uye nezvimwe
Kuburitswa kwe iyo nyowani vhezheni yehunyanzvi hwekuparadzira Miswe 4.2 (Iyo Amnesic Incognito Live System). Ichi chi kugovera uko kunobva pane hwaro hweDebian 10 package y yakagadzirirwa kupa kusazivikanwa kuwana kune network, kuitira kuchengetedza zvakavanzika uye kusazivikanwa kwemushandisi pane network.
Asingazivikanwe kuburitswa kubva kuMiswe kunopihwa naTor Mukubatana kwese kubva traffic mukati meTor network, ivo vanovharirwa nekusarongeka nepaketi firita, iyo mushandisi isingasiye trace pane network kunze kwekunge ivo vachida neimwe nzira. Encryption inoshandiswa kuchengetedza mushandisi data mune chengetedza mushandisi dhata modhi pakati pekutanga, pamusoro pekuburitsa akateedzana maficha akafanogadzirirwa akagadzirirwa kuchengetedzeka uye kusazivikanwa kwemushandisi, senge webhurawuza, iyo tsamba mutengi, an pakarepo meseji mutengi pakati pevamwe.
1 Main nyowani maficha eMiswe 4.2
2 Dhawunirodha Miswe 4.2
2.1 Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani vhezheni yeMiswe 4.2?
Main nyowani maficha eMiswe 4.2
Nekuburitswa kweiyi nyowani vhezheni yeMiswe 4.2 vanogadzira vanotaura kuti akashanda vakaita sei kuvandudza iyo sisitimu yekuisa zvigadziriso otomatiki. Nekuti kana zvisati zvaitika, kana zvichidikanwa, kugadzirisa iyo system yanga isati yagadziridzwa kwenguva yakareba, nhanho-nhanho yekuvandudza uchishandisa yepakati shanduro dzaidikanwa
Uyewo Ivo vanojekesa mukana wekukwanisa kuita pakarepo yakananga otomatiki kugadzirisa kune yazvino vhezheni.
Zvakare, kutora chikamu kutora chikamu mune iyo yekudzoreredza kwave kungodiwa chete kana uchichinjira kune rakakosha bazi nyowani (semuenzaniso, zvichazodiwa kana uchichinjira kuMiswe 5.0 muna 2021).
Kune rumwe rutivi, Ivo zvakare vanotaura kuti memory yekushandisa yakaderedzwa panguva yekugadzirisa otomatiki uye saizi yekurodha yakagadziridzwa zvakare.
Nezve makuru mapakeji eiyo system, tinogona kuona kuti Tor browser yakagadziridzwa kuita vhezheni 9.0.3, inowirirana pamwe nekuburitswa kweFirefox 68.4.0, vhezheni umo 9 kushupika kwakabviswa, shanu dzacho dzinogona kutungamira mukuitwa kwekodhi pakuvhura mapeji akagadzirwa.
Iyo email mutengi Thunderbird yakagadziridzwa kuita 68.3.0 uye yemoyo weiyo system iyo Linux kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.3.15.
Tinogona zvakare kuwana mune iyi nyowani vhezheni yeMiswe 4.2 inosanganisira akati wandei ekushandisa nyowani izvo zvinogona kubatsira kune vashandisi veSecureDrop sevhisi, iyo inobvumidza kusazivikanwa kuendesa magwaro kuzvinyorwa uye vatori venhau
Kunyanya, iyo package inosanganisira iyo PDF Redact Zvishandiso package yekuchenesa gwaro metadata PDF, OCR Tesseract yekushandura mifananidzo kuita mameseji uye FFmpeg kunyora uye kushandura odhiyo uye vhidhiyo.
Imwe shanduko inotaurwa muziviso ndeye apo KeePassX password maneja inotangwa, iyo dhatabhesi ~ / Kuramba / keepassx.kdbx inovhura nekutadza, asi kana iri faira rikashaikwa, rinosarudzwa kubva pane rondedzero yedzidziso dzichangobva kushandiswa.
Finalmente Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ruzivo rweiyi kuburitswa kweMiswe 4.2, unogona kushanyira kuziviswa kweichi chitsva vhezheni mune inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha Miswe 4.2
Mufananidzo wakawanikwa kubva muchikamu chekurodha chiri 1,1 GB ISO chifananidzo chinokwanisa kushanda mune live mode.
Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani vhezheni yeMiswe 4.2?
Kune avo vashandisi vane vhezheni yechinyakare yeMiswe yakaiswa uye vanoda kusimudzira kune iyi vhezheni itsva. Ivo vanofanirwa kuziva kuti iko kusimudzira kwakananga kuMiswe 4.2 kunogona kuitwa zvakananga kubva kuMiswe 4.0 kana 4.1.
Panguva yevashandisi vachiri mubazi re3. Kune izvi ivo vanogona kushandisa yavo USB chishandiso icho chavaishandisa kuisa Miswe, vanogona kubvunza ruzivo kuti vatakure kufamba uku pakombuta yavo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Miswe 4.2 inouya neyakajeka inogadziridza, nyowani vhezheni yeTor uye nezvimwe
Sonos akamhan'arira uye ari kukumbira kuti kutengeswa kweGoogle zvigadzirwa muUS kurambidzwe.